भिडियो च्याट Vreale TV
रान्डम भिडियो च्याटमा 000०००० भन्दा बढी प्रयोगकर्ता र टन प्रसारणहरू
कुराकानी सकारात्मक भावनाहरू, फ्लर्टिir र आकर्षक केटीहरूले भरिएको छ। हामी यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्दैछौं, र हामी तपाईंलाई १ 18 बर्ष मुनिका कसैलाई अनुमति दिदैनौं, जबकि तपाईंलाई अपमानजनक सामग्रीबाट बचाउँछौं। यसका साथै, तपाईं अप्रिय प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको आफ्नै म्यूट र प्रतिबन्ध सूचीमा थप्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि धन्यबाद, हामी नयाँ प्लेटफार्ममा नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्नका लागि सहजै छौं।
च्याटभलेट अनुप्रयोगको वेबक्याम प्रसारण मात्र देखाउँदैन, निजीमा कुराकानी गर्न तपाईको आफ्नै वेब क्यामेरा खोल्न र बन्द गर्न पनि एक अनौंठो अवसर छ। सँगै कुराकानी एक अर्कालाई राम्रोसँग जान्ने उत्तम तरिका हो।
नि: शुल्क क्याम
Vreale TV विश्व को सबै कुनाबाट सबै प्रकारका मानिसहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। संगीतकारहरू, खेलाडीहरू, पार्टीका मानिसहरू: तिनीहरू सबै मिल्ने र रमाइलोको साझा चाहनाले एकताबद्ध छन्। चाँडै च्याट कोठामा प्रवेश गर्नुहोस् र Vreale TV भिडियो च्याटको मैत्री समुदायमा सामेल हुनुहोस्।
लवली स्टिकर र ईमोटिकन्स। हाम्रो प्रतिभाशाली कलाकारहरूले मनमोहक र प्रफुल्लितकारी स्टीकरहरूको भारी बनाउँदछन् किनकी कहिलेकाँही एकल समयमै स्टिकरले पाठको भित्ता भन्दा पनि बढी भन्न सक्दछन्। हाम्रा केही प्रयोगकर्ताहरू स्टिकरहरू मार्फत मात्र कुराकानी गर्छन्! केटीहरु संग फ्लर्टिंग यो कहिल्यै सजिलो र लापरवाह थिएन। तर पक्कै पनि सबै पुरानो-स्कूल इमोटिकॉन प्रयोगकर्ताहरूको लागि हामीसँग सबैभन्दा लोकप्रियहरू छनौट छ।
वास्तविक प्रत्यक्ष क्यामहरू
तपाईं आफ्नो स्ट्रिम को आफ्नै अनौंठो शैली बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको सामाजिक नेटवर्कमा वर्णन र लिंकहरू थप्नुहोस् र सेवाहरू दान गर्नुहोस्। वर्णनमा तपाईं च्याटमा खेल वा ब्यवहारका नियमहरू वर्णन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत ब्लगमा भिडियो, फोटो र लेख प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तो सोच्न प्रयोग गरियो कि तपाईंलाई आफ्नै वास्तविकता शो सिर्जना गर्न तपाईंलाई बिलकुल पागल पैसा चाहिन्छ। तर त्यो केस हैन, समय परिवर्तन हुँदैछ र अब तपाई यसलाई चट्रुलेटमा नि: शुल्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी निरन्तर सेवा सुधार गर्न कार्य गर्दैछौं, तर वर्तमान सुविधाहरू पनि यसका लागि पर्याप्त छन्। हामी तपाईंलाई प्रारम्भिक दर्शकहरू र आफैं कमाउने अवसर पनि दिन्छौं। तपाईं प्रयोगकर्ताहरूबाट सल्लाहहरू कमाउन सक्नुहुनेछ, दर्शकहरूको अर्डरहरू पूरा गर्नुहोस् र अवश्य पनि तपाईं विज्ञापनबाट कमाउन सक्नुहुनेछ, च्याट रूममा देखाएर वा युट्यूबमा रेकर्ड गरिएको रियलिटी शो पोस्ट गरेर।
सामान्य टेक्स्टि this यस समयमा एकदम पुरानो हो, र यसले तपाईंलाई भिडियो च्याटबाट प्राप्त भएको आत्मीयता प्रदान गर्न सक्दैन। तपाईं अन्य शहरहरूबाट नयाँ केटीहरू भेट्नुहुनेछ, अन्य देशहरू भन्दा पहिले सजिलो! भेट्नुहोस्, समाचार छलफल गर्नुहोस्, र प्रभावहरू साझा गर्नुहोस्। चीजहरूलाई रमाईलो बनाउनको लागि, तपाईं र तपाईंले च्याट गरिरहनु भएको व्यक्तिको लागि उपलब्ध विकल्पहरूको चौड़ाई नबिर्सनुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाई भर्चुअल मितिमा जान सक्नुहुन्छ, र मैनबत्तीको साथ रोमान्टिक डिनर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको कल्पना संलग्न गर्नुहोस्, तपाईंको वेबक्याम, र शारीरिक दूरी गायब हुनेछ। आश्चर्यजनक!